&nbsp;बिबिसी&nbsp;/ विमान निर्माता कम्पनी बोइङले दुई वटा इन्जिन भएको विश्वको सबभन्दा ठूलो जेट &lsquo;७७७ एक्स' को पहिलो परीक्षण उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। उक्त अमेरिकी कम्पनीले निर्माण गरेका दुई वटा विमान दुर्घटनामा परेपछि ७३७ म्�
&nbsp;एजेन्सी&nbsp;/ माइक्रो ब्लगिङका लागि सबैभन्दा चर्चित एप्लिकेसन ट्वीटरले फेसबुककै जस्तो फिचर प्रदान गरेको छ। धेरै समययता मानिसहरुले ट्वीट इडिट गर्ने फिचरको माग गरिरहेका छन्। नयाँ फिचर त्यससँग भने सम्बन्धित छैन। हालै ट्वीटर�
एजेन्सी&nbsp;&nbsp;/ के तपाई अत्यधिक फोन चलाउने आफ्नो आदतबाट &nbsp;छुटकारा पाउन चाहनु हुन्छ ? यदी त्यसो हो भने चिन्ता नगर्नुस, गुगलले तपाइको लागि नै भनेर तीनवटा नयाँ एपहरु विकास गरिदिएको छ। सामान्यतया हामीले देख्ने गरेका एपहरुले सो एप प्र�
पृथ्वीको सबैभन्दा पुरानो वस्तु भेटिएको वैज्ञानिकहरुको दावी
काठमाडौं/वैज्ञानिकहरुले पृथ्वीको सबैभन्दा पुरानो वस्तु भेटिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले अन्तरिक्ष चट्टान भित्र धूलो अनाज भेट्टाए जुन सन् १९६०को दशकमा पृथ्वीमा खस्यो जुन&nbsp; ७.५ अरब वर्ष पुरानो हो। यसका साथै उनीहरुले सबैभन्द�
जुकरबर्गले ट्रम्पलाई भनेः तपाइँ फेसबुकको नम्बर एक
एजेन्सी&nbsp;/ फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले आफूलाई &lsquo;फेसबुकको नम्बर एक व्यक्ति&rsquo; भएको बताएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन्। सोमबार अमेरिकाको &lsquo;राइट&ndash;विंग रेडियो टक सो&rsquo;मा प्रस्तोता रस लिम्बसँग कुर�
प्रकाशित मितिः पुष, 22, 2076
2159 पटक पढिएको
‘ह्याक’ भए अमेरिकी सरकारी एजेन्सीको वेबसाइट
काठमाडाैं ।&nbsp;अमेरिकाको सरकारी वेबसाइट ह्याक भएको छ । अमेरिकन सरकारी निकाय फेडरल डिपोजिटरी लाइब्रेरी प्रोग्रामले आफ्नो वेबसाइट ह्याक भएको जनाएको छ । ह्याक इरानी समुहले गरेको आशंका गरिएको छ । वेबसाइइट खोल्दा &lsquo;इन द नेम अफ् गड&
एजेन्सी/&nbsp;विश्&zwj;वभर फाइभजीको चर्चा चलिरहँदा चीनले भने&nbsp;&lsquo;सिक्स जी&rsquo;को प्रोजेक्ट आधिकारिक रुपमा घोषणा&nbsp;गरेको छ। चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले&nbsp;अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्ने गरी नयाँ जेनेरेशनको टेक्नो�
अब फोनमा गोप्य कुराकानी नगर्नुस्, यस्तो छ कारण
एजेन्सी&nbsp; /&nbsp;सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई थप अधिकार दिएर बलियो बनाउने तयारी गरेको छ । विभागलाई विदेशीको प्रतिजासुसी गर्नेदेखि टेलिफोन ट्यापिङ गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको छ । संसदमा दर्ता भइसकेको नेपाल व�
एजेन्सी&nbsp;/ गुगलले आफ्नो क्लाउड प्रिन्ट सर्भिस बन्द गर्ने योजना बनाएको छ । नाइन टु फाइभ गुगलले आफ्नो रिपोर्टमा गुगलको उक्त सेवा आगामी २०२० डिसेम्बर ३१ पश्चात् बन्द हुने बताएको छ । उक्त दिन अन्तिम प्रिन्ट उपलब्ध हुनेछ र त्यसपछ�
2261 पटक पढिएको
बीबीसी&nbsp;/ आफ्ना केही एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भएका सुरक्षा त्रुटि पहिचान गरिदिनेलाई प्रविधि कम्पनी गुगलले न्यूनतम दुई लाख अमेरिकी डलर (दुई करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ) देखि अधिकतम १५ लाख अमेरिकी डलर (१७ करोड २५ लाख रुपैयाँ) सम्म प�
गूगलले राजनीतिक विज्ञापनमा कडाइ गर्दै
एजेन्सी/गूगलले राजनीतिक विज्ञापन सम्बन्धमा आफ्नो नीतिलाई अझ कडा बनाएको छ । मतदाताहरुलाई प्रभावित गर्न अनलाइन प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विभिन्न पार्टीहरुले गलत जानकारी सम्प्रेषण गर्नसक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । राजनीतिक विज्
काठमाण्डौँ&nbsp;/ हालै गुगलद्वारा निर्मित क्वान्टम कम्प्युटरले गणितको एउटा जटिल प्रश्न केवल ३ मिनेट २० सेकेन्डमा हल गरिदिएको छ । यही समस्या हल गर्न संसारकै सबैभन्दा तेज सुपर कम्प्युटरलाई पनि कमसेकम १० हजार वर्ष लाग्न सक्छ । यसब�
2104 पटक पढिएको
एजेन्सी&nbsp;/ म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले चार खुट्टा भएको यस्तो रोबोट बनाएको छ, जसले एक सेकेन्डमा ३० पाइला चाल्न सक्छ । यसका साथै उक्त रोबोट १४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा दौडन सक्छ । उक्त रोबोटको नाम &lsquo;मिनी च
प्रतिघन्टा २ सय ५० माइल कुद्नसक्ने कार सार्वजनिक
एजेन्सी /&nbsp;विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा कुद्नसक्ने कार सार्वजनिक भएको छ। जापानी कम्पनी एसपार्क ओलले नयाँ विद्युतीय हाइपर कार सार्वजनिक गरेको हो जुन विश्वमा हाल रहेका कारभन्दा तीव्र गतिमा कुद्नसक्छ। दुबईको कार मेलामा यस क�
काठमाडौं/&nbsp;एप्पल प्रोडक्टको नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता इेभोस्टोरले नेपालमा नयाँ आईफोन ११ र ११ प्रो भित्र्याएको छ ।&nbsp; कम्पनीले आईफोन ११ र ११ प्रोका सुविधाहरूमा सुधार गर्दै विक्रीका लागि ल्याएको हो । सुधार पनि व्यक्तिहरू�
एप्पलले सार्वजनिक गर्‍यो १६ ईन्चको म्याकबुक प्रो, यस्ताे छ फिचरहरू
एजेन्सी ।&nbsp;नयाँ भर्सनको म्याकबुक प्रो सार्वजनिक भएको छ । आईफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले सार्वजनिक गरेको म्याकबुकमा १६ ईन्चको डिस्प्लेका साथ नयाँ डिजाइनको किबोर्ड प्रयोग गरिएको छ । यसअघिका भर्सनमा प्रयोगकर्ताले किबोर्ड अस�
“पल्सर डेयर भेन्चर ४” नोभेम्बर १६ देखि
काठमाडौं&nbsp;/ बजाज मोटरसाइकलका अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ले &ldquo;पल्सर डेयर भेन्चर सिजन ४&rdquo; रिफ्रेसड बाई स्प्राईट &nbsp;गर्ने भएको छ । पल्सर डेयर भेन्चर ४ यहि शनिबार अर्थात नोभेम्बर १६ तारिकबाट राति ९ बजेदेखि �
फेसबुकबाट हट्यो एक करोड १६ लाख बालयौन हिंसाका सामग्री
एजेन्सी ।&nbsp;पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको सामाजिक संञ्जालको रुपमा रहेको फेसबुकले बाल यौन हिंसा सम्बन्धी गलत सामग्री हटाएको दाबी गरेको छ । फेसबुकमा बालयौनदुव्र्यहार सम्बन्धी विभिन्न गलत साम्रगी प्रयोग भइरहेको&nbsp;भन्ने दबाब
सिएनएन/&nbsp;तपाईंलाई थाहा छ संसारमै सबभन्दा छिटो उड्ने विमान कुन हो?&nbsp;सबभन्दा लामो दुरी उड्ने नि? वा, सबभन्दा धेरै उचाइमा उडेको विमान? यस्तो विमान कुनै कम्पनीले बनाइरहेको होला भन्ने तपाईंको अड्कल हो भने एउटा महत्वपूर्ण विमानको क�
3307 पटक पढिएको
तिहार प्रकृतिका विभिन्न पक्षको सन्तुलनको पर्व - ओली
काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिहारलाई प्रकृतिका विभिन्न पक्षको सन्तुलनको पर्व भएको बताएका छन् । तिहार अर्थात दीपावलीका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएको हो । प्रधानमन्त�